Irridda Jaxiima Ee Adduunka - Waadinews | Somali News and Entertainments
Diyaarad drone ah ayaa sawirro iyo muuqaallo argagax badan ka so qaaday bohol weyn oo holcaysay in ka badan 48 sannadood. Godkan oo lagu magacaabo “Irridda Jaxiima” ayaa ku yaalla lama-dagaan ka tirsan dalka Turkmenistan.
Irridda Jaxiima oo ballaceedu yahay 69 Mitir, jooggeeduna dhan yahay 30 Mitir ayaa samaysmay sannadkii 1971-kii kaddib markii uu dhulku la go’ay mid ka mid ah qalab ay Injineeradii Midawgii Soviet ay ku baadhayeen Naqaska Dabiiciga ah, arrintaas na waxaa ka dhashay in uu godka is xawli ah ugu soo butaaco naqas dabiici ah.
Kaddib markii ay injineeradu ku guul daraysteen inay qabtaan Naqaskaas waxay door bideen inay dab qabadsiiyaan si aanu waxyeelo u gaadhsiin deegaanka maadaama uu sun yahay. Injineeradu waxa ay xilligaas aamin sanaayeen in uu godku muddo yar ku damayo balse tan iyo maalintaas waa uu holcayaa, isaga oo noqday meel loo dalxiis tago.
Related Topics:Door to Hell "Gate to Hell"Irridda Jaxiima